व्यवस्थापन ज्ञान : नयाँ कर्मचारीको सेवा प्रवेश | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी व्यवस्थापन ज्ञान : नयाँ कर्मचारीको सेवा प्रवेश
on: २७ असार २०७५, बुधबार १२:३८ रोजगारी
अधिकांश मानिसलाई नयाँ जागीर चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ । तर, सही प्रक्रिया अपनाएर संस्थाले नयाँ कर्मचारीलाई जागीरको वातावरणमा भिज्न सहज बनाउन सक्छ । नयाँ कर्मचारीलाई जागीरमा प्रवेश गराउने प्रक्रियालाई ‘अनबोर्डिङ’ भनिन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीको शुरुआती समय सरल बनाउन संस्थाले सहयोग गर्न सक्ने तरीका यस्तो हुन सक्छ :
१. अनबोर्डिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउने
अनबोर्डिङ प्रक्रियामा नयाँ कर्मचारीलाई कम्पनीको समग्र लक्ष्य र दृष्टिकोण (भिजन, मिशन, भ्यालुज आदि)को पहिचान गराउन आवश्यक छ । नयाँ कर्मचारीलाई स्वागत गर्दा उसलाई एक्लै तथा समूहमा कम्पनीको विस्तृत जानकारी पनि दिनुपर्छ । यस जानकारीमा मानव संसाधन नीति, तलब–भत्ता, कम्पनीको काम गर्ने संस्कृतिलगायत अन्य कुरा पर्छन् । यसले नयाँ कर्मचारीको कम्पनीमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँछ ।
२. मानव संवेदनाको प्रयोग
अनबोर्डिङ प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न प्रविधिको पनि प्रयोग गरिन्छ । यसमा प्रविधि सहयोगी त हुन्छ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । मानव संवेदनाको प्रयोग पनि आवश्यक छ । नयाँ कर्मचारीलाई कार्यालयबारे जानकारी दिने प्रक्रियामा व्यवस्थापकहरू आफै उपस्थित हुन आवश्यक छ ।
उनीहरूबाट नयाँ कर्मचारीलाई संस्थाको काम गर्ने शैली र संस्कृतिबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
३. नेतृत्वदायी भूमिका महत्त्वपूर्ण
नयाँ कर्मचारीलाई कार्यालयमा अपनत्व महसूस गराउन अत्यन्त जरुरी छ । त्यसैकारण संस्थाले आफ्नो कम्पनीको नेतृत्वदायी पदमा रहेका व्यक्तिलाई यसो गराउने जिम्मा दिनुपर्छ । वरिष्ठ नेताहरूले नयाँ कर्मचारीसँग केही समय खर्च गरेर उनीहरूबारे जान्ने र भविष्यमा उनीहरूबाट कम्पनीले केकस्ता अपेक्षा राख्न सक्छ भन्ने पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ कर्मचारीलाई कार्यालयमा सम्बन्धित समूहसँग चिनापर्ची गर्ने र घुलमिल हुने अवसर प्रदान गर्नुका साथै उनीहरूलाई केही नयाँ कुरा पनि सिकाउन आवश्यक छ ।
संस्थाका नेताहरूले पनि कर्मचारीप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै उनीहरूलाई संस्थाको लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुरामा एक महŒवपूर्ण भूमिका दिनुपर्छ ।
४. कुनै खेलको प्रयोग
कुनै खेलको प्रयोग गरेर पनि कर्मचारीलाई संस्थामा सहज महसूस गराउन सकिन्छ । नयाँ कर्मचारीलाई कम्पनीबारे जानकारी प्रदान गर्न संस्थाले अनलाइन गेम तथा हाजिरीजवाफजस्ता खेलको प्रयोग गर्न सक्छ । यसले कम्पनीको समस्या रोचक ढङ्गबाट समाधान हुन्छ ।
५. सुझाव सङ्कलन गर्ने
अनबोर्डिङको प्रक्रियामा गरिएका प्रशिक्षण र पहिचान कार्यक्रमसम्बन्धी अनुभव कस्तो रह्यो भनेर सुझाव सङ्कलन गर्ने सर्वेक्षणको आयोजना गर्नुपर्छ । यसले प्रक्रियामा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन संस्थालाई सहयोग गर्छ ।
नयाँ कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने केही कुरा
आफूले राम्रो काम गरेमा नयाँ काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । जागीरमा तपाईंको पद अस्थायी नै भएपनि आफ्नो काम राम्ररी गर्दा फाइदा तपाईंलाई नै हुन्छ ।
भरोसायोग्य कर्मचारी बन्ने :
यसले तपाईंको सुपरभाइजरलाई तपाईंका लागि काम कत्तिको महŒवपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न सहयोग गर्छ ।
अपेक्षा गरेभन्दा बढी काम गर्ने :
तपाईंले आफ्नो काममा त महारथ प्राप्त गर्नुपर्छ नै । यसका साथै तपाईंले संस्थाको अपेक्षाभन्दा बढी काम पनि गर्र्नुपर्छ । ‘यो मेरो काम होइन’ भन्ने प्रवृत्तिलाई अँगाल्नु हुँदैन ।
संवादको बाटो खुला राख्ने :
आफ्ना सुपरभाइजरलाई आफूले काममा कत्तिको प्रगति गर्दै छु भन्नेबारे जानकारी गराउने र आफ्नो काम संस्थालाई वा उनलाई कस्तो लागिरहेको छ भनेर उनीसँग पनि जानकारी लिइरहनुपर्छ । यसका लागि नियमित सम्पर्कमा रहने गर्नुपर्छ ।
आफूलाई दिइएको काममा कुनै अन्योल भए अगाडि बढ्नुअघि एकपटक त्यसबारे छलफल गरेर स्पष्ट हुुनुपर्छ ।
सहकर्मीको साथमा रमाउने :
कार्यालयको वातावारणमा भिज्ने प्रयास गर्ने र आफ्ना सहकर्मीसँग समय बिताएर उनीहरूबारे बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । तपाईंको व्यावसायिक प्रगति यसैमा निर्भर छ ।
कार्यालयमा हुने राजनीतिको पछि नलाग्ने :
नयाँ कर्मचारीले कार्यालयमा हुने राजनीतिमा चासो दिनु त्यति उचित हुँदैन । गोपनीयता अपनाउनुपर्छ र अनावश्यक गफमा भुलेर बस्नु हुँदैन ।
सल्लाह र सहयोग माग्ने :
परेको बेलामा आफूले अन्य कर्मचारीसँग सहयोग माग्न सकिन्छ र उनीहरूलाई पनि आफूले केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर सोध्न सकिन्छ ।
समूहमा काम गर्न चतुर पनि हुन आवश्यक छ । यसमा अरूको कुरा राम्रोसँग र धैर्यपूर्वक सुन्ने तथा कुन बेला समाधान गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
आत्मविश्वासी, दृढ र खुला हुन आवश्यक छ । यसमा ३–ई अर्थात् ‘इन्थुसियाजम, एनर्जी र एक्सिलेन्स’ प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारी सहयोग कार्यक्रमको प्रयोग
कार्यालयमा हुने कर्मचारी सहयोग कार्यक्रमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले आफ्नो सन्तुलन विन्दु पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । काम तथा व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनबीचको सन्तुलनको खोजीमा रोजगारदाता एक किसिमका साझेदार नै हुन् ।